အချိန်ပေး၍ လာရောက်ဖတ်ရှုသူများကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ....
အားလုံးပဲ ဒီကဗျာ တိုတိုလေးကိုပဲ ဖတ်ထားပေးကြပါဦးနော်၊ ညလေး ပို့စ်အဟောင်းတွေကို မေးလ်ကနေ ပြန်တင်နေလို့ပါ။ ဒီကြားထဲမှာ အဆင်ပြေသလို အသစ်တွေ တင်သွားဦးမှာပါ။
ဒီကဗျာလေးက အရင် ၂၀၀၉ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တုန်းက ရေးတင်ထားတာပါ Draft ဖြစ်သွားလို့ ပြန်တင်တာ Date ပြောင်းသွားတယ် သည်းခံကြပါ။ Blog ပြန်ရေးဖို့ အရှိန်ယူနေပါတယ်ရှင်။
ရေးသားသူ ညလေး4comments Links to this post
ဘလော့ဂ်ကို ပြစ်ထားတာ ကြာပါပြီ ဒီနေ့ စိတ်လိုလက်ရ ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးက ညလေးဘလော့ဂ်ရဲ့ ဆိုက်ဘားမှာ တင်ထားတဲ့ ကိလေသာ (၁၀)ပါး မှားနေတဲ့အကြောင်း မိန့်ထားတာတွေ့လို့ Blogspot ကို ၀င်လို့ရနေတုန်းလေး အမြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ အမှားပြင်ဆင်ပေးသွားတဲ့ ဘုန်းဘုန်းကို ကျေးဇူး အထူးပဲ တင်ရှိပါတယ်ဘုရား။ နောက်လဲ အမြင်မတော်ရင် (ဒါမှမဟုတ်) မှားယွင်းနေတာများ ရှိနေရင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးကြပါလို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပါ။
ရေးသားသူ ညလေး0comments Links to this post
သူငယ်ချင်းများ အားလုံး မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ စစခြင်းမှာ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ညလေးဘလော့ဂ်ကို မမေ့မလျော့ လာရောက် အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများကို ညလေးကလဲ အမြဲပဲ သတိတရရှိနေပါတယ်။ အဆင်မပြေတဲ့ အချိန်တွေကြောင့် ဘလော့ဂ်ပေါ် မရောက်ဖြစ်တာ အားလုံးကို နားလည်ပေးပါလို့တော့ ပြောချင်တယ်။ နားလည်ပေးမယ် ဟုတ်???။
ဘာရေးရင်ကောင်းမလဲဟင်!!! အကြံပေးကြပါလား သူငယ်ချင်းတို့။ ညလေး ဘာရေးရမှန်းမသိတော့လို့ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ ပို့စ်တစ်ပုဒ် နှစ်ပုဒ်လောက် တစ်လနေရင် တစ်ခါ တက်မယ် ထင်ပါ့.. ခိခိ။ ကဲ.. ကဲ ဒီကနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲ တပည့်တို့.. ဆရာမ ပြန်တော့မယ်ကွယ်.. အားလုံးပဲ နှုတ်ဆက်ကြမယ် ဘိုင့် ဘိုင်....။
ရေးသားသူ ညလေး2comments Links to this post
နတ်ကွန်းမဟုတ်လို့ အမွှေးတိုင်လဲ မထွန်းမိဘူး။
နင်တို့ အထက်တန်းလွှာတွေ လာပေါင်းမှ
ချစ်စရာ့ ဖြူလွလွ ငွေစံပယ်
ရေးသားသူ ညလေ3းcomments Links to this post
ရေးသားသူ ညလေး 1 comments Links to this post
သုတ၊ ရသစုံအောင် ခံစားစေတယ်လေ....
"ဟဲ့ ညလေး ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် သဘောကျနေရတာလဲ" (သူဇာ)
"ဟီး ရီချင်လို့ပါဟ တွေးလေ တွေးလေ ရီချင်လေပဲ ဟီးးးး"
"ဟာ မေးတာဖြေဦးလေ စွတ်ရီနေတယ် တော်ကြာ အူတွေ ထွက်ကျလာဦးမယ်" (ငယ်မ)
"ဟိ ပြောပါမယ်ဟ ပြောချင်လို့လဲ နင်တို့ကို စောင့်နေတာ ဟီးးးးး"
"ဟဲ့ နင်ရူးသွားပြီလား နရဲ ကြည့်ပါဦး ညလေး ရူးပြီလားမသိ တရီထဲရီနေတယ်" (ငယ်မ)
"ဟုတ်မယ်ဟ ကြည့်ပါလား စကားတောင် ပြန်မပြောနိုင်ဘူး ဗိုက်နှိပ်ပြီး ရီနေတာ လာ သူ့အမေ သွားပြောရအောင်ဟာ" (နရဲ)
"ဟာ မရူးပါဘူးဟ နင်တို့ကလဲ ငါပြောပြီးရင် နင်တို့လဲ ငါ့လိုပဲ ရီကြမှာ ဟိ"
"အေးလေ သိသားပဲ ဘာလဲ မှောက်ရက်လဲလို့လား"
"ဟာ မှောက်ရက်လဲရင် ငါဒီလိုရီမလား ငိုနေမှာပေါ့ ခုဟာက"
"သြော် ကဲ ညလေး ငါ လုံးဝ စိတ်မရှည်တော့ဘူး နာရီဝက်လောက်ရှိပြီ မေးနေတာ လိုရင်းကို မရောက်တော့ဘူး" (သူဇာ)
"နင်တို့ကလဲနော် ငါက ဘယ်ကစပြောရမလဲ စဉ်းစားနေတာပါ"
"ဘယ်က စ ပြောပြောဟာ ပြောလိုက် မရစ်နဲ့တော့" (နရဲ)
"ဒီလိုဟ ဟိ ဟိ"
ညလေး အဖွားက ကွမ်းကို တအားစားတာ။ ဘယ်လောက်တောင် စားလဲဆိုရင် နှုတ်ခမ်း ထောင့်စွန်းတွေတောင် ကွမ်းသွေးတွေ ပေနေတာ ပြန်ချွတ်မရတော့ဘူးလေ။ ထမင်းစားပြီးလဲစား၊ မစားခင်လဲစား၊ တစ်နေ့လုံးစားတာ ညအိပ်ရင်တောင်မှ ကွမ်းဗူးကို အိပ်ယာဘေး ထားအိပ်တာလေ တစ်ရေးနိုးရင်လဲ မျက်လုံးမဖွင့်ပဲ လက်နဲ့စမ်း ယူပြီး ပါးစပ်ထဲ ငုံထားတာ။ အဲ့လောက်တောင် ကြိုက်တယ်။ ဘယ်သူပြောပြော ဘယ်သူတားတား လုံးဝကိုမရဘူး။
"ဟဲ့ ငါ့မှာ ဒါလေးပဲ အပျင်းပြေစရာရှိတယ်၊ နင်တို့ကို ထိခိုက်နေလို့လား၊ ငါကြိုက်တာလေး လုပ်တာပဲ နင်တို့က လိုက်တားမြစ်နေကြတယ်"
ဆိုပြီး ပြောတော့လဲ ဘယ်သူမှ မတားကြတော့ဘူးလေ။ ပြောမရတော့လဲ ဒီတိုင်းကြည့်နေကြတာပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ် အိမ်ရှိတဲ့ လူကုန် အလုပ်သွား၊ ကျောင်းတက်ကြတဲ့ခါ အဖွားက အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့ရတာဆိုတော့ ပုတီးစိပ်၊ ဘုရားခန်းဝင်ရင်ဝင် မ၀င်ရင်လဲ ထိုင်ပြီး ကွမ်းမြုံ့နေတော့တာ။
"ကြိုက်တာပေါ့ ငါ့မြေးရဲ့ ဘာလို့လဲ"
"ဟင် အဖွားကလဲ ဘာအရသာရှိလို့လဲ၊ ပါးစပ်လဲ မလှတော့ဘူး ကွမ်းသွေးတွေ ပေနေတယ်၊ သွားတွေမှာရောပဲ၊ ပြီးတော့ ကွမ်းစားရင် သွားဖုံးတွေ၊ လျှာတွေမှာ အနာတွေ ပေါက်တတ်တယ်တဲ့"
"အပျင်းပြေတယ် မြေးမရဲ့၊ ဒါတွေ မြေးဘယ်သူပြောတုန်း"
"ဖွားကလဲ အပျင်းပဲပြေတာ ဘာကောင်းလို့လဲ၊ တီဗွီမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် လွှင့်ရင် ဒေါက်တာတွေ ပြောနေတာ တွေ့ရတာပဲကို"
"ကဲ မြေးကို ရှင်းမပြတတ်တော့ဘူး သွား ကိုယ့်ဖာသာ သွားဆော့ချည်တော့"
"အင်း ဖွားတစ်ယောက် ကွမ်း မြန်မြန် ပြတ်ပါစေလို့ မြေးတော့ ဘုရားမှာပဲ ဆုတောင်းနေတော့မယ်၊ ဟွန့် ကွမ်းစားတာ မြေး မကြိုက်ဘူးဆိုမှ တစ်နေ့တစ်လေတောင် မစားပဲ မနေဘူး"
ညလေးလဲ ပြောမရတဲ့ ဖွားနားကနေ ခြေစောင့် ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်လေ။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ အဲ့ဒီနေ့ပေါ့ ဖွားကို ကွမ်းပြတ်စေခဲ့တဲ့နေ့လေ ညလေး မမေ့တော့ဘူး ဟိ ရီလဲ ရီရတယ် မဟုတ်လား တွေးလေ ရီချင်လေနဲ့ တစ်အိမ်လုံးလဲ အဖွားကို စလို့ မဆုံးကြတော့ဘူးလေ။ အဖြစ်က ဒီလို
ဖွားက ခါတိုင်းလိုပဲ ညနေ အိမ်သားတွေနဲ့ ထမင်းစားပြီး တီဗွီခဏထိုင်ကြည့်ရင်း စကားပြောကြ ဘုရားခန်းဝင် ၀တ်ပြုပြီး အိပ်ယာ ၀င်ခဲ့ကြတာပေါ့။ မနက်ကို ညလေးလဲ ခါတိုင်းလိုပဲ အဖွားခန်းသွား ပြတင်းတံခါးတွေ ဘာတွေဖွင့် အဖွားကို နှိုးလဲပြီးရော ထုံးစံအတိုင်း ညတုန်းက ယူငုံထားတဲ့ ကွမ်းကို ပါးစောင်ထဲက ထုတ်ပြီး ထွေးခံမှာ ထွေးတာပေါ့။ ဒီမှာပဲ ဟိ
"ဟင် အဖွား ဒီဟာ ဘာကြီးတုန်း ဖြူဖြူကြီး"
"အင် ဖွား ပါးစပ်ထဲက ထွက်လာတာပဲလေ၊ ခုပဲ ဖွားထွေးထုတ်လိုက်တာ"
"ဟုတ်လား ဟုတ်လား ပြစမ်းပါဦး၊ ဟဲ့ နေဦး ငါ့ကို မျက်မှန်ပေးဦး"
ဖွားက မျက်စိမှုန်နေပြီလေ ပါဝါမှ များကြီးပဲ မျက်မှန်မပါရင် အကုန်လုံး ၀ါးတားတားပဲ ကောင်းကောင်း မမြင်ရဘူး၊ မျက်စိခွဲပါ ဆိုတော့လဲ ခွဲချင်ဘူးတဲ့ အသက်ကြီးပြီလေ ဆိုပြီး ပြောမရပြန်ဘူး (အဲ့လိုမျိုး ခေါင်းမာတဲ့ ဖွား)။
"ဟုတ်ပ ဖြူဖြူတုံးကြီး ငါလဲ သတိမထားမိပါဘူးအေ"
"ဖွား ဒီဟာတွေကရော ဘာတွေလဲ"
ကျမလဲ ဟိုဒီလျှောက်ကြည့်ရင်း ဖွားရဲ့ ခုတင်ဘေး စားပွဲခုံပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကွမ်းအစ်ဘေးနားက ပန်းကန်ပြားထဲမှာ အမွှေးလိုလို သွေးစတွေနဲ့ တွေ့လိုက်တော့
"ဖွား ညတုန်းက ငရွှေကြီး ၀င်သေးလား"
"အေး ၀င်တယ် ထင်တယ် အသံတော့ကြားလိုက်တယ်၊ ဖွားလဲ သတိမထားမိလိုက်ပါဘူး"
"ဒါဆိုရင် သေချာပြီ၊ ဟားးးဟားးးး ဖွားကတော့ဖြစ်ရမယ်၊ ဖွား ထွေးထုတ်ထားတာ ကြွက်ခေါင်းကြီး၊ ငရွှေက ကြွက်ဖမ်းလာပြီး ဖွားအခန်းထဲက စားပွဲခုံပေါ် တင်စားပြီး ကျန်နေရစ်တဲ့ ကြွက်ခေါင်းကြီးကို ဖွားက ကွမ်းအမှတ်နဲ့ တစ်ညလုံး ငုံထားတာပေါ့ ဝေါ့၊ ပြောရင်းနဲ့ အန်ချင်လာပြီ ဝေါ့"
"ဟဲ့ ဟုတ်ရဲ့လား မိညလေးရယ် ခု နင်ပြောတာနဲ့တင် ငါ့မှာ အန်ချင်လာတယ်"
"ဟုတ်ပ ဖေ၊ မေ၊ ကိုကိုရေ လာကြပါဦး ဒီမှာ ဖွားဖွား ကြွက်ခေါင်းကြီးကို ကွမ်းအမှတ်နဲ့ တစ်ညလုံးငုံထားတာ ဖြူဖွေးနေပြီ"
"ဟဲ့ မြေးမ မအော်နဲ့လေ မပြောနဲ့လေ ဝေါ့"
ဖွားလဲ ပြောပြောဆိုဆို ရေချိုးခန်းထဲသွားပြီး အန်ပါတော့တယ်။ ညလေးလဲ တစ်အိမ်လုံးကို လှည့်ပတ်ပြောရင်း အဲ့ဒီနေ့ တစ်မနက် ဖွားအခန်းထဲ လူတွေ ပြည့်သွားပါတော့တယ်။ ဖွားဆို တစ်နေ့လုံး တစ်ဝေါ့ဝေါ့နဲ့ အန်လို့မဆုံးတော့ဘူး ဘာမှလဲ ကောင်းကောင်း မစားတော့ဘူးလေ။
အဲ့ဒီနေ့ကစလို့ ဖွားက ကွမ်းဆို အသံတောင် မကြားချင်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတာ ဒီနေ့ထိ တကယ် လုံးဝကို မတို့တော့ဘူးလေ။ တစ်ပါတ်လောက်တော့ အစားအသောက် ပျက်လိုက်တာပေါ့။ ဟိ ဒါပေမယ့် အားလုံးက အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပဲ ကျေးဇူးတင်နေတာ။ ဖွားကိုလဲ အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စလို့နောက်လို့ ကောင်းနေကြတာ အားလုံးက ချစ်ကြတော့ တစ်ပါတ်လောက်လဲ ဆေးခန်းကို သွားလိုက်လာလိုက် လုပ်ပြီး ရောဂါ ဖြစ်မဖြစ်လဲ စစ်ဆေးရသေးတယ်လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်စရာ ကျေးဇူးတင်စရာ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ အမှတ်တရပေါ့။
"ဟားးး ဟားးးးး ဟားးးးးးးး ဖြစ်ရမယ် ညလေး ဖွားဖွားလို့မပြောရဘူး ဖြစ်လိုက်ရင် အရာရာနဲ့ အကြောင်းကြောင်းချည်းပဲ၊ နင်ပြောတာ နားထောင်ရင်း ငါတောင် အန်ချင်လာတယ်၊ ငါသာဆိုရင် ဝေါ့" (နရဲကောင်ရဲ့ မှတ်ချက်)
"ဟုတ်ပ ငါသာဆိုရင်လို့ တွေးလိုက်တိုင်း လှိုက်လှိုက်တက်လာတဲ့ ရွံရှာမှုကတော့ မပြောတတ်တော့ဘူး ဟ" (ဒါကတော့ ငယ်မလေ)
"အေးဟ နင်ရဲ့ အဖွားပဲကိုနော" (သူဇာပေါ့ လေသံကိုက)
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီလို ဒီလို ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့ တကယ် မမှတ်ကြပါနဲ့နော်။ ဒါက ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ထဲက အကြောင်းအရာ တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကိုပဲ "ငါသာဆိုရင်" ဆိုပြီး တွေးလိုက်တိုင်း အန်ချင်လာပါတယ်။ ဝေါ့........
ကွမ်းစားတာကို တအားမုန်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ကွမ်းတံတွေးတွေ ဟိုဒီလျှောက်ထွေးတာ ပိုကြည့်မရပါဘူး။ နေရာအနှံ့ ညစ်ပတ်နေရင် အဲ့ဒီလူကို ရှုံ့ချချင်ပါတယ်။ ပါတ်ဝန်းကျင် ညစ်ပတ်ယုံမက လူကိုပါ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစားအသောက်ကို ခုံမင်နှစ်သက်စွာ စားသုံးနေကြတဲ့ သူများကို ဒီပို့စ်ပေးဖတ်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ဒီတစ်ခုက ဘာကောင်းကျိုးပေးနိုင်မလဲ ဘာဆိုးကျိုးတွေ သက်ရောက်စေလဲဆိုတာ သေချာ သုံးသပ်ပြီးမှ သုံးစွဲ စားသောက်ကြစေလိုပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများ ကျန်းမာသန့်ရှင်း ရောဂါကင်းဝေးကြပါစေ နော်.....
ဒါက ပို့စ်အဟောင်းလေးပါ ပြန်တင်ထားတာပါ။
နောင်လာရင်သွေး သင်... ဘာလေးမွေးမလဲ?
ဘုန်း နေ လ မီး ထိန်ထိန်ငြီးစွာ
တင်ထွန်း (G.T.I နှစ်တစ်ရာပြည့်မဂ္ဂဇင်း)
ဒီကဗျာကို “အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက ကူးယူပြီး ပြန်လည် ဝေမျှပါတယ်နော်.. အားလုံးပဲ သတိရှိနိုင်ကြပါစေ။ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး ခံစားရတယ်၊ သူများတကာ ဗုဒ္ဓနိုင်ငံတွေ ၀ါးမျိုခံခဲ့ရသလို မြန်မာပြည်ကြီးသာဆိုတဲ့ အတွေး ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓသာသနာကြီး အဓွန့်ရှည်စေဖို့ အမျိုးကောင်းသမီးတွေ သူများဘာသာထဲ ၀င်ရောက်မသွားဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါ။ သူတို့တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကို တစစ ၀ါးမြိုလာတာ များနေပါပြီ။ မြန်မာပြည်မှာလဲ လူမျိုးရောတွေ တအားများလာတာ သူတို့တွေကြောင့်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသူတွေကို ငွေပေးရင်ရတဲ့ ပြည့်တန်ဆာမတွေ ဖြစ်နေကြပြီလို့ သူတို့တွေက ပြောထားကြပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲက စာသားတွေက တစ်ချို့အတော်လေး မဲပြီး စာလုံးတွေ မနည်းဖတ်ယူရပါတယ်။ ညလေးသာ အချိန်ရခဲ့ရင် အစ အဆုံး ပြန်ရိုက်ပြီး စာအုပ်လုပ် အခမဲ့ လိုက်ဝေမိမှာပါ။
ဒီစာကိုရေးသားတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ကိုယ့် ဘာသာ သာသနာ ကို ချစ်တတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းတာပါ၊ ဒီ့ပြင် အကြောင်းအရာတွေ မပါဝင်ပါဘူး။ ကျမကလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း တခြားဘာသာထဲ ကူးပြောင်းသွားမှာကို အမှန်တကယ် စိုးရိမ်မိပါတယ်။ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စကနေပြီး ကျယ်ပြန့်သွားတဲ့ခါ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ကမ္ဘာ့မြေပေါ်ကနေ လုံးဝ ကွယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီစာအုပ်ကို လိုချင်ရင် Comment မှာ e-mail ထားခဲ့ပါနော်... ညလေး ပို့ပေးပါ့မယ်။
သူငယ်ချင်းများ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ သာသနာ့အကျိုးကို ဆထက်တိုးပြီး ထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေ....။
ကဏ္ဍ ကဗျာ, ဖြန့်ဝေခြင်း
လုပ်ချင်တာမဖြစ်တာက ဖြစ်အောင်မလုပ်သေးလို့ပါလို့ ယူဆထားတဲ့ ဘာမှ မထူးဆန်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။
(၁) လောဘ---- လိုချင်တပ်မက်ခြင်း။
(၂) ဒေါသ------ စိတ်ဆိုးအမျက်ထွက်ခြင်း။
(၃) မောဟ----- တွေဝေမိန်းမောခြင်း။
(၄) မာန-------- ထောင်လွှားမောက်မာခြင်း။
(၅) ဒိဌိ--------- အယူမှားခြင်း။
(၆) ၀ိစိကိစ္ဆာ---- ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
(၇) ထိန-------- ထုံထိုင်းခြင်း။
(၈) ဥဒ္ဓစ္စ-------- ပျံ့လွင့်ခြင်း။
(၉) အဟိရိက---- ဒုစရိုက်မှမရှက်ခြင်း။
Subscribe to NyAlAy by Email
ဘလော့ဂါတွေ အပြိုင်ကြဲ အသစ်ရေးတိုင်း အပေါ်မှာပဲ...
မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့အာဇာနည်
ပင့်ကူအန် တိမ်တိုက် ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ အသစ်စက်စက် ဟောင်းနွမ်းခြင်းများ
အဂ္ဂဘုန်း (မေမေ့ မေတ္တာ)
မြရွက်ဝေ (☆•.¸ ¸.•♥愛妻弁当♥•.¸ ¸.•☆)
၀ှက်ဖဲများနဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရသည့် Underground Hip-Hop
မစ္စတာပူး မှ ကမ္ဘာမြေကြီးသို့.....
My Freedom Windows
Exiter's Music Blog
zAw M0E aUnG
ဤဘလော့ဂ်ပေါ်ရှိ စာများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဒီဇိုင်းများ နှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာများကို စီးပွားရေးနှင့် နှီးနွယ်သော လုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် သတင်း၊ မီဒီယာများတွင် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ခွင့်ပြုချက် ကြိုတင်တောင်းခံကြရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ပြဿနာများကို လုံးဝ လုံးဝ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါသည်။
Looking for something? Try :::